महिलाहरूसँगको व्यवहारका कारण बिग्रेको बिल र मेलिन्डा गेट्सको दाम्पत्य जीवन – Mission
महिलाहरूसँगको व्यवहारका कारण बिग्रेको बिल र मेलिन्डा गेट्सको दाम्पत्य जीवन
बिल गेट्स र मेलिन्डा फ्रेन्च गेट्सले बिहे गरेको २७ वर्षपछि डिभोर्स गरे। उनीहरू आफैंले दुई साताअघि यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
संसारकै धनाढ्यमध्येका र समाजसेवामा पनि नाम कमाइसकेका बिल र मेलिन्डा किन अलग भए ? यसबारे भइरहेका अड्कलबाजी र चर्चा सेलाएको छैन। यसैबीच सार्वजनिक भएका केही घटनाले बिलको आनीबानीबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यसमा बिलले महिलाहरूप्रति गर्ने व्यवहारको कुरा पनि छ।
बिल र मेलिन्डाको भेट माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा भएको थियो। सन् १९८७ देखि मेलिन्डा माइक्रोसफ्टमा उत्पादन प्रबन्धकका रूपमा आबद्ध थिइन्। बिल मेलिन्डाका हाकिम थिए।
हाकिम–कर्मचारीको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भएपछि यी दुईले कार्यालयमै प्रेमिल क्षणहरू साटे। कार्यालयभित्र विभिन्न अवसरहरूमा बिल मेलिन्डालाई ‘फ्लर्ट’ गर्थे। उनीहरू खुसुक्क भागेर कम्पनीको पार्किङ लट जाने गरेको मेलिन्डाले आफ्नो अन्तर्वार्तामा बताएकी छन्।
सन् १९९४ मा यी दुईको विवाह भयो।
तर केही वर्षको अन्तरालमै बिल कार्यालयका अन्य महिलाहरूसँग नजिकिन थाले। सन् २००६ मा उनी माइक्रोसफ्टकी एक महिला कर्मचारीको प्रस्तुतिमा सामेल भएका थिए। उनको प्रस्तुतिपछि पनि कार्यक्रम जारी थियो। त्यसैबीच बिल आफ्नो कुर्सीबाट जुरूक्क उठे र ती महिलालाई डिनरको प्रस्तावसहित इमेल पठाए।
‘यदि यो प्रस्तावले तिमीलाई असहज बनाउँछ भने सोच्नु कि यो सन्देश आएकै छैन,’ बिलको उक्त इमेल पढेका एक जनाले न्यूयोर्क टाइम्ससँग भने।
बिलको उक्त सन्देशले ती महिलालाई एकदमै असहज बनाएको उनका परिचितहरू बताउँछन्। उनले त्यस्तो प्रस्ताव कहिल्यै आएकै थिएन भनेर चित्त बुझाउनु नै उचित ठानिन्।
एकाध वर्षपछि बिल गेट्स ‘गेट्स फाउन्डेसन’ को तर्फबाट न्यूयोर्क गए। उनीसँगै फाउन्डेसनमा काम गर्ने एक महिला थिइन्। एउटा कक्टेल पार्टीमा जाँदा बिलले मधुरो स्वरमा उनको कानमा फुस्फुसाए, ‘के तिमी मसँग डिनर जान्छौ?’
त्यो प्रस्तावले ती महिलालाई असहज बनायो। तर उनले हाँसेरै टारिदिइन्।
बिलका यस्तै हर्कतले कार्यालयमा काम गर्न असहज भएको ६ जना नयाँ–पुराना कर्मचारीले बताएका छन्। कार्यालयमा हुँदा होस् या बाहिर, बिल महिलालाई असहज ढंगले हेर्थे। यस्तै व्यवहारका कारण कर्मचारीहरूले उनको व्यक्तिगत जीवनबारे कुरा काट्न थालिसकेका थिए।
बिलका सोचाइ र गतिविधिहरू पत्नी मेलिन्डाको महिला सशक्तीकरण मुद्दाभन्दा विपरीत रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मेलिन्डाले अमेरिकी महिलाहरूको शक्ति र प्रभावलाई बढावा दिन सन् २०१९ अक्टोबर २ मा एक अर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
‘अहिले अधिकांश महिलाहरू काम गर्छन्, तै पनि उनीहरूले यौनहिंसा र भेदभावको सिकार भइरहनुपरेको छ। हामी पक्षपाती र रुढीवादी व्यवहारले घेरिएका छौं,’ टाइम पत्रिकाको एक स्तम्भमा उनले लेखेकी छन्।
फाउन्डेसनको एक बैठकमा बिलले आफू प्रभावशाली छु भनी देखाउन मेलिन्डालाई होच्याएर बोलेको केही कर्मचारीले बताएका छन्।
त्यस्तै सन् २०१७ मा गेट्स दम्पतीका निकट सहकर्मी माइकल लार्सनले यौन उत्पीडन आरोप खेपेका थिए। लार्सन करिब ३० वर्षसम्म गेट्सको पैसा व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत छन्।
उनले गेट्स दम्पतीको व्यक्तिगत र फाउन्डेसनको करिब १ सय ७४ अर्ब डलर लगानीबाट राम्रो कमाइ आर्जन गराएका थिए। यसको निम्ति ‘क्यासकेड इन्भेस्टमेन्ट’ मार्फत् सेयर, ऋणपत्र, होटल र ठूला खेतीयोग्य जमिनमा लगानी परिचालन गरिएको थियो।
त्यस्तै, ‘र्‍याली क्यापिटल’ भनिने भेन्चर क्यापिटल फर्ममा पनि उनीहरूको लगानी थियो। यसको अफिस क्यासकेडको स्वामित्व रहेको भवनमा थियो।
र्‍याली क्यापिटलले एक स्थानीय साइकल पसलमा पनि लगानी गरेको थियो। सन् २०१७ मा उक्त साइकल पसलकी कर्मचारीले एक वकिलमार्फत् बिल र मेलिन्डा गेट्सलाई चिठी पठाइन्। चिठीमा लार्सनले उनलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यो समस्याको समाधान आफैं गर्न खोजे पनि असफल भएपछि गेट्स दम्पतीसँग सहयोग मागेको उनले उल्लेख गरेकी थिइन्। उनीहरूबाट पनि कुनै समाधान पाइएन भने आफू कानुनी उपचारमा जाने उनले बताएकी थिइन्।
न्यूयोर्क टाइम्सलाई तीन जनाले बताएअनुसार सन् २०१८ मा ती महिलालाई पैसा दिएर एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइ उक्त घटना सामसुम पारियो। बिल यसपछि ढुक्क भए पनि मेलिन्डालाई चित्त बुझेको थिएन। उनले उक्त घटनाको स्वतन्त्र जाँच गराउन वकिल खटाइन्। अनुसन्धान जारी रहँदा लार्सनलाई बिदामा राखिएको थियो। उक्त अनुसन्धानले लार्सनलाई दोषी ठहर्‍यायो कि ठहर्‍याएन भन्ने यकिन छैन। तर लगत्तै उनी काममा फर्केका थिए र उनी अहिले पनि क्यासकेडमा कार्यरत छन्।
यसको करिब एक वर्षपछि द टाइम्स पत्रिकाले बिल गेट्स र जेफ्री एपस्टाइनको सम्बन्धबारे लामो लेख प्रकाशित गर्‍यो। बिल र एपस्टाइनको चिनजान सन् २०११ मा भएको थियो। यी दुई जनाले लामो समयदेखि विभिन्न अवसरमा सँगसँगै समय बिताएको विवरण उक्त लेखमा थियो। एपस्टाइनकै निजी जेटमा उडेर उनको म्यानहटन टाउनहाउसमा आयोजित रात्रि भेलाहरूमा बिल सामेल हुन गएका थिए।
एपस्टाइनमाथि केटीहरूलाई यौन बेचबिखनमा लगाएको आरोप थियो। मेलिन्डालाई एपस्टाइनसँग बिलको निकटता चित्त बुझेको थिएन। उनले एउटा रात्रिभोजमा बिलसँग आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरेकी पनि थिइन्।
त्यति हुँदाहुँदै बिलले एपस्टाइनलाई भेट्न छाडेनन्। उनी डिनर र बैठकका नाममा बारम्बार एपस्टाइनलाई भेटिरहन्थे, जहाँ आकर्षक महिलाहरू वरिपरि हुन्थे। बिलकी प्रवक्ता ब्रिडगिट आर्नोल्डले भने गेट्स र एपस्टाइनबीच वैचारिक छलफल मात्र हुने बताएकी छन्।
द टाइम्स पत्रिकामा बिल गेट्स र एपस्टाइनका त्यस्ता कुराहरूको पनि विस्तृत वर्णन थियो, जुन मेलिन्डालाई थाहै थिएन। उनीहरूको हिमचिमबारे खबर सार्वजनिक भएपछि मेलिन्डा निराश भएकी थिइन्। उक्त लेख प्रकाशनपछि नै मेलिन्डाले केही वकिलसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि परामर्श लिएको उनका निकटस्थहरूले बताएका छन्।
केटीहरूलाई यौन बेचबिखनमा लगाएको आरोपमा समातिएको केही समयपछि नै, सन् २०१९ मा एपस्टाइनले हिरासतमै आत्महत्या गरेका थिए।
बिल–एपस्टाइन र मेलिन्डाका कुरा आ–आफ्नै ठाउँमा छन्। के त्यही कारण गेट्स दम्पतीको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो? यो कुरा अझै स्पष्ट छैन।
मेलिन्डासँग हालै कुराकानी गरेका एक व्यक्तिले भने, ‘आफू जिन्दगीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले वैवाहिक जीवन छाड्नु नै उत्तम छ भन्ने उनले निर्णय गरेकी थिइन्।’
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ५, २०७८ 10:17:03 AM |
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय खबर, प्रदेश गतिविधि, समसामयिक, समाचार
Prevनेपालमा पत्ता लाग्यो कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट
Nextकोरोनाबाट हुने दैनिक मृत्युमा अमेरिकालाई पछि पार्‍यो भारतले